UNgqongqoshe nowakwakhe bavakashele iGroutville High School | News24
UNgqongqoshe nowakwakhe bavakashele iGroutville High School
UNGQONGQOSHE wezaseKhaya, uMnuz Malusi Gigaba, uvakashele isikole, iGroutville High School ngeledlule ukuzo gubha usuku lokuzalwa kwenkosikazi yakhe uNkk Norma Gigaba.
UNgqongqoshe nowakwakhe bebephelezelwa umskazi woKhozi u-Dj Sgqemeza, okunguyena ohlele lo mcimbi, umculi wezokholo uMnuz Thina Zungu no-Dj Happygirl.
UNkk Gigaba unikele nge-Chess kulesi sikole okuyindlela yokugubha usuku lokuzalwa kwakhe.
Unxuse abafundi ukuba beqikelele ukuthi imiphumela yabo ibamihle uma kuphela unyaka, wathi uma isikole senze kahle uzophinde esivakashe ngonyaka ozayo ukuzo gubha usuku lwakhe lokuzalwa kanye nalesi sikole futhi uthe uzophatha nezipho.
Lo mcimbi obusingathwe abafundi, othisha nothishanhloko wesikole, uNkk Dolly Govender oyiSekela likaMeya waKwaDukuza, uNkk Dolly Shandu oyiSekela likaMeya wesifunda iLembe noMnuz Sibusiso Ngwane oyikhansela lika Ward-10
UMnuz Gigaba, ekhuluma nabafundi, uthe: “Into ebalulekile kini njengamanje imfundo,” kusho yena.
Unxuse abafundi ukuba bekhombise ukuzimisela emsebenzini wabo wesikole waphinde wabaxwayisa ngezingozi zokuya oncansini olungavikelekile, ukuphuza utshwala, ukusebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni nokuzibandakanya nobugebengu.
UNgqongqoshe uqhube wathi abafundi mabangahlaseli abokufika, kodwa kumele bekhombise ukuzwana nokuzwelana nabo.
Uthe: “Umthwalo wenu njenga bantu base-Ningizimu Afrika, njengentsha yakuleli, ukuphikisana nenzondo nabalingani bethu base-Afrika, nokuzibophezela ekusebenzeni kanzima,” kusho yena.
Uthe intsha yakulesi sikole inethuba lokuba iqikelele ukuthi, uma umhlaba ucabanga nge Afrika, ucabange ngendawo eyenza izimanga, uthe lokhu kuzofezeka uma abafundi bebeka imfundo yabo phambili.
Uthe: “Sebenzisani lelithuba ukuba nibe abantu abaphumelelayo. Ngiyakholelwa kinina futhi ngiyathembela kinina. Ningabantu abanekusasa elihle, futhi abazo abaphumelelayo,” kusho uMnuz Gigaba.
UMnuz Gigaba uqhube wathi asikho isidingo sokuba abantu behlasele abokufika, bephinde bentshontshe izimpahla abazithengisayo, wathi uhulumeni uzibophezele ekutheni zonke izikhalo zomphakathi wase-Ningizimu Afrika zixazululwe.
Uthe kuyamuthokozisa ukuthi uwakwakhe unikele ngesipho kulesi sikole wathi uyazi qhenya ngalokhu